Archive du 14-juin-2021
Nikorapaka ny PAF - Ivato « Tsy nanakana minisitra izany izahay »
Nambaran’ny vaovao an-gazety iray ny herinandro teo, fa mpikamban’ny governemanta maromaro no tsy nentina tany Tolagnaro tamin’ilay “colloque”
Ny resaka zo, fahalalahana maneho hevitra, ny fiheverana ny atao hoe fampandrosoana,
Eric Rabesandratana « Misy mpilalao hita fa reraka »
Nikarakara ity fihaonana eo amin'ny samy Barea ity izahay mba hahafahana mamantatra ny momba ny mpilalao tsirairay,
Tovolahy vao 15 namoy ny ainy Voalaza fa nodarohana miaramila
Tsy hita nanomboka ny alahady hariva 6 jona 2021 teo ity zazalahy kely iray, saingy hita faty ny abotsy 12 jona 2021 teny am Hopitaly HJRA.
Madagasikara Ny 27% n’ireo zaza tsy ampy taona no miasa
Ny 27%-n’ireo zaza tsy ampy taona 5 ka hatramin’ny 17 taona no fantatra fa efa misehatra eo amin’ny tontolon’ny asa sahady eto amintsika.
Andohatapenaka Jiolahy mpanakan-dalana iray no matin’ny polisy
Jiolahy iray lavon’ny balan’ny polisy, iray hafa azo sambo-belona. Io no vokatry ny hetsika nataon’ny polisy nisamborana ireo andian-jiolahy
Fetin’ny fahaleovantena Atao isaky ny renivohi-paritany ny matso
Notsiahivin’ny Filoha ankehitriny Andry Rajoelina nandritra ny kabariny omaly 13 jona ny fihenan’ny trangana valanaretina tao anatin’ny iray
Kianja BAREA Mahazaka mpijery 40 000
Efa vita hatrany amin’ny 90% ny asa fanamboarana ny kianjan’i Barea Mahamasina,
Varotra sy fanjifana Avy aiza marina ireo omby hohanin’Antananarivo ?
Fanontaniana mbola tsy ahitam-baliny hatramin’izao ny hoe : Fa mankaiza marina ireo omby hangalarin’ny dahalo ireo ?
Antoko politika Otrikafo “Tokony hajanona ny fandraisana fanampiana amin’ny Frantsay”
Nivoaka iny ny didim-pitondrana frantsay nilaza ny hanaovana ny Nosy sambatra ho valan-javaboary frantsay faha 170,
Ady amin’ny tsy fananan’asa Tanora miisa 160.000 no efa nahazo fiofanana
Tanora miisa 160.000 no efa nomen’ny Ministeran’ny Fampianarana teknika sy ny fanofanana arak’asa fiofanana teto amintsika tato anatin’ny 9 volana.
Velirano vaovao indray “Hanova ny tantaran’ny any Atsimo isika”
Tsy nisy nandaitra sy nitoetra ny ezaka tao anatin’ny 60 taona. Nanampy foana ny mpiara-miombon’antoka,
Famokarana angovo Mihemotra amin’ny 2025 ny fampiasana an’i Volobe
Mihemotra amin’ny taona 2025 ny fahafaha-mampiasa ny ivon-toerana famatsiana angovo ao Volobe (Faritra Atsinanana)
Famakiana tranom-barotra Zaza tsy ampy taona ny jiolahy iray
Tena hikoizana ireo mpamaky trano any Fenoarivo Atsinanana. Ankoatra ny vehivavy dia misy zaza tsy ampy taona ihany koa no sady milalao ody gasy.
Fitantanana an’i Madagasikara Tena ilaina ve ny fisian’ny Praiminisitra ?
Mbola olana eto Madagasikara mandrak’androany ny fomba ny endri-pitantanana hitondrana ny firenena.
Lalao andran’ny Barea Nisongadina ireo mpilalao avy eto an-toerana
Satria moa tsy nahazo lalao fanomanana hifanandrinana amina ekipam-pirenena hafa ny Barean’i Madagasikara ao anatin’izao fiomanana amin’ny
Mpifaninana ho zandary 1500 Entanina hanao vaksiny ireo ho any Ambositra
Nanao fampitam-baovao momba ny «Fanentanana hanao vakisiny ho an’ireo mpifaninana hiatrika dingana faharoa hidirana ho mpianatra ho zandary»
Coronavirus 12 maty, 93 ny tranga telo andro
Olona 12 no namoy ny ainy tao anatin’ny 3 andro (10-11-12 jona), nampiakatra ny isan’ny olona lavo tamin’ity volana ity ho 46,